I-Russian Blue Cat | Amakati eNoti
El Ikati eluhlaza okwesibhakabhaka yaseRussia yona, kunye nePersi, luhlanga olugqwesileyo. Andibhekiseli kumlinganiswa wakhe ozolileyo nonyanisekileyo, kodwa kunye nokuhamba kwakhe kunye nomzimba omncinci. Inkangeleko yale ndoda inoboya inzima, kodwa kwangaxeshanye, iyakwazi ukuthomalalisa abo bayifunayo.
Inobuhlobo kwaye inothando, ikati eluhlaza okwesibhakabhaka yaseRussia iyakuthanda ukuphathwa kwaye, ngaphezulu kwako konke, ukufundiswa izinto. Ngaba uyafuna ukuba ngutitshala wakhe?
1 Imvelaphi kunye nembali yekati eluhlaza okwesibhakabhaka yaseRussia
2 Iimpawu ezibonakalayo zekati eluhlaza okwesibhakabhaka yaseRussia
3 Ihlala ixesha elingakanani ikati eluhlaza okwesibhakabhaka yaseRussia?
4 Umlinganiswa wekati ohlaza okwesibhakabhaka waseRussia
5 Inkathalo yekati eluhlaza okwesibhakabhaka yaseRussia
6 Impilo yekati eluhlaza okwesibhakabhaka yaseRussia
7 Ngaba ikati eluhlaza okwesibhakabhaka yaseRussia ibangela ukwaliwa?
8 Ixabisa malini ikati eluhlaza okwesibhakabhaka yaseRussia?
9 Iifoto zekati ezihlaza okwesibhakabhaka zaseRussia
Imvelaphi kunye nembali yekati eluhlaza okwesibhakabhaka yaseRussia
Nangona kungaziwa ncam ukuba ivelaphi, ngenkulungwane ye-XNUMX, eArkhangelsk (eRashiya) iikopi ezimbalwa zathengwa zasiwa eNgilane. Ukususela ngoko, baya besanda abantu abanomdla kubo, kwaye ngo-1880, baboniswa okokuqala.
Nangona kunjalo, ngeminyaka yoo-40 olu hlobo lwalusengozini yokuphela ngenxa yeMfazwe yesibini (II) yeHlabathi. Ukuphepha oko ngokungathandabuzekiyo kuya kuba yintlekele, bahlangana neekati zaseSiamese. Kwiminyaka embalwa kamva, ngo-1970, kwakunokwenzeka ukusebenza kwakhona ukufumana i-Russian Blue ecocekileyo, kwaye ngo-1984 banokwamkelwa ngokusemthethweni njengogqatso.
Iimpawu ezibonakalayo zekati eluhlaza okwesibhakabhaka yaseRussia
Ikati eblue yaseRussia yikati ephakathi ukuya kubukhulu obukhulu, inobunzima kwi I-3,5kg yabasetyhini, kunye ne-7kg yamadoda. Intloko incinci, inokhakhayi olusicaba, namehlo aluhlaza ohlaza, ohlukaniswe ngokubanzi kodwa ongafikeleli esiphelweni.
Inomzimba omde, owomeleleyo, onemilenze emide, kwaye ugqunywe ngoboya obufutshane obungqindilili, obuluhlaza nangwevu. Abanye banokuba neemeko zesilivere, nto leyo ibizwa ngokuba ukunikezelwa kwesilivere, kodwa yamkelwe ngakumbi into yokuba ikati inombala oluhlaza okwesibhakabhaka.
Ihlala ixesha elingakanani ikati eluhlaza okwesibhakabhaka yaseRussia?
Ukulindelwa kobomi bekati eluhlaza okwesibhakabhaka yaseRussia kunjalo I-15 ukuya kwi-20 iminyaka, ngoko ke iyalingana nezinye iintlanga ezinjengeYurophu eqhelekileyo. Ngokuqinisekileyo ezi ziindaba ezimnandi, kuba phantse amashumi amabini eminyaka uya kuba nakho ukonwabela ubuhle kunye nobumnandi beli silwanyana.
Umlinganiswa wekati ohlaza okwesibhakabhaka waseRussia
Ikati eluhlaza okwesibhakabhaka yaseRussia izolile, kodwa ukungathembi nabantu abo kunye nezilwanyana ongazaziyo. Ungasebenzisana kakuhle nabo ukuba nje bakuphatha kakuhle, ngaphandle kokungxama okanye uxinzelelo; Ngaphandle koko, umlozi, ukukrokra, njalo njalo kuya kuba yinto eqhelekileyo.
Ngezi zizathu, le yikati ezakuhlala kakuhle kwiintsapho- nokuba abanabo abantwana - abazolileyo, abathanda ukuchitha ixesha kunye nomhlobo wabo onemilenze emine (umzekelo, ngelixa bebukele umabonakude okanye befunda incwadi), kodwa ngaphandle kokukugqithisa. Kwaye ukuba ucwangcisa ukukhulisa usapho, kunye nezinye izikhokelo zentlalontle ungayifumana ikati yakho ukuba ibe ngumhlobo welungu elitsha kungekudala.
Inkathalo yekati eluhlaza okwesibhakabhaka yaseRussia
Ikati eluhlaza okwesibhakabhaka yaseRussia ifuna amanzi amatsha nacocekileyo, ukutya okusemgangathweni kunye nokuxubha imihla ngemihla. Kodwa ukongeza kwezi nkathalo zintathu, Kuyimfuneko ukumsa kugqirha wezilwanyana, njengenjana ukufumana lonke ugonyo, kwaye kanye xa sele ekhulile ukuba ahlole impilo yakhe.
Omnye umba obalulekileyo esingasilibaliyo ngulo juego. Ngaphandle kokuba uyikati ezolileyo, sukuyidika. Isilwanyana esikruqulayo sisilwanyana esingazukuthatha thuba lide ukwenza izinto ezingafanelekanga, njengokukrwela ifanitshala okanye ukuluma.
Kwiivenkile zezilwanyana uza kufumana izinto zokudlala ezingenakubalwa, ezinjengezikhombisi zelaser, iibhola, izilwanyana ezifakiweyo, iintambo, imidlalo edibeneyo ... Thenga ezona uzithandayo chitha iiseshoni ezimbalwa ezimfutshane ngemini ukonwaba kunye nomqolo wakho. Ungamfundisa nemiyalelo, njengokuhlala phezulu okanye ukukhaba ibhola.
Impilo yekati eluhlaza okwesibhakabhaka yaseRussia
Ikati eluhlaza okwesibhakabhaka yaseRussia inokuziqhayisa ngokuba yenye yezona ntlobo zidumileyo zisempilweni. Oku kungenxa, ngokuyinxenye, kwinto yokuba abantu abade bayiguqula. Kodwa lumka, oku akuthethi ukuba awungekhe ugule, kude kuyo. Sisidalwa esiphilayo, kwaye njengawo wonke umntu sinokugula, okanye sifumane ingozi.
Ngoko ke, Ukususela kumzuzu wokuqala uqaphela okanye ubone ukuba akaphilanga, kuya kufuneka umse kugqirha wezilwanyana. Ezona zifo zixhaphake kakhulu kwimikhuhlane yingqele, i-otitis, i-conjunctivitis, kunye neengxaki zesisu. Ukuba ufumana amachiza afunekayo, unokukhuseleka kakhulu kwiintsholongwane ezibangela ezinye izifo ezinobungozi, ezinje nge-feline immunodeficiency okanye ikholera.
Ngaba ikati eluhlaza okwesibhakabhaka yaseRussia ibangela ukwaliwa?
Ikati yokungezwani komzimba yingxaki enkulu kwabo bathanda ezi zilwanyana. Kodwa unokuqiniseka, kuba umbala ohlaza okwesibhakabhaka waseRussia unengubo eyenziwe ngamanqanaba amabini asondelelene kakhulu kwaye, ukongeza, eshinyene, ke Inani leenwele ezilahlekileyo lingaphantsi kakhulu kunalahleko lolunye uhlobo.
Kodwa ukuba oku kubonakala kukuncinci kuwe, kuya kufuneka uyazi ukuba ivelisa glyprotein encinci yeFel D1, yile nto ibangela iimpawu zokungabikho komzimba. Oku kuyenza ukuba ithathelwe ingqalelo njengekati ye-hypoallergenic.
Ixabisa malini ikati eluhlaza okwesibhakabhaka yaseRussia?
Ngaba uza kufumana ikati eluhlaza okwesibhakabhaka yaseRussia kwaye ufuna ukwazi ukuba ingakubiza malini? Ukuba kunjalo, kuya kufuneka uyazi ukuba uza kuyithenga kwindawo yokutsala ngendleko iindleko malunga nazo 700 euro. Ukuba, kwelinye icala, ukhetha ukuyifumana kwivenkile yezilwanyana zasekhaya, elo xabiso liya kuba sezantsi, malunga ne-euro ezingama-500.
Iifoto zekati ezihlaza okwesibhakabhaka zaseRussia
Ikati eluhlaza okwesibhakabhaka yaseRussia sisilwanyana esinomtsalane, ke ngekhe siliphelise inqaku ngaphandle kokukunika igalari yezithombe zale furry. Siyathemba uyabathanda:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iikati zikaNoti » Amakati » I-Russian Blue Cat
IZiko lamazinyo sitsho
Ndithathe ikati efanayo nale ikwifoto yesibini. Usebenza kakhulu kwaye uyahlekisa, kutshanje ubonakalise iingxaki ze-parasitic ngenxa yemeko yakhe yasesitratweni. Ngaphambi kokuba ndingazithandi iikati, kodwa noLeoncio wam ndiziva ndonwabile. Ndiza kufunda okuninzi malunga nabo kwisiza.
Phendula kwiziko lamazinyo
Ndinekati entle endandingayazi ukuba yayiyintoni ukuza kuthi ga izolo umntu odlulayo endixelela ukuba iblue Russian, igama lakhe ngu-ninel kwaye ngoku ndiyaqonda ukuba kutheni xa siphuma nenkosikazi yam wayelila ubusuku Phambi kokuba simkhuphe kwaye sonwabile ndiyazithanda izilwanyana ezintle kakhulu zonke iikati kodwa ngakumbi i-ninel yam
ISIPHO IIKATSI ZEBHAYIBHILE ZERUS
Banobuntu obuhle kwaye banothando kakhulu. Bangamadoda nabasetyhini. Bayagonywa, basuswe iintshulube, banenzalo kwaye banetshiphu.
Bafundile kakhulu. Bahlala bahlala nam kwikhaya losapho oko bazalwa kwiminyaka emi-4 eyadlulayo. Ke bavuke kakhulu kubantu abadala abancinci ekungafanelekanga ukuba bafundiswe ukwenza "izinto ezincinci" kwibhokisi yabo yesanti. Azange balume okanye bakrwembe nabani na kuba beve ubumnandi obubajikelezileyo.
Bayakonwabela ukubukela, ukukulandela, kunye nokucoca ecaleni kwemilenze yakho ukuze ubaphathe.
Ndibanike isipho kuba kwiminyaka emibini eyadlulayo ndandingenayo into eyaliwa Nangona ndizamile ukuyoyisa, sele iye ngaphezulu. Kwaye andisakwazi ukubanika ingqalelo kunye nothando olufanelekileyo.
Ndikhangela ikhaya lethu sobabini. Bangabantakwabo, bahlala bekunye kwaye yile ndlela bafuna ukuba yiyo. Bayavana ngokumangalisayo. Kwaye iikati ezimbini ziludibaniso olufanelekileyo lokugcina enye inkampani xa ungekho ekhaya kunye nokuphinda kabini ukuntywila xa ufika ekhaya.
Abantu ababalulekileyo nabanoxanduva abafuna ukunika nokwamkela uthando oluninzi.
Amantshontsho alungele ukuhambisa e-Barcelona.
Iifoto zeekati zaseRussia eziluhlaza okwesibhakabhaka ezinamehlo eorenji ayizizo ezo zohlobo, ziikati zecharreux, olwahlukileyo uhlobo kwaye amehlo abo eorenji.
Ukwazi njani ukuba ikati yam iya kuba nkulu kangakanani
Yintoni ekufuneka ikati ekhulelweyo itye